Hem / Xaqaaga iskoolka	/ Waxaad xaq u leedahay in aad iskool aaddo
Waddankaan Iswiidhan waa waajib in la dhigto iskool. Taa macnaheedo waxey tahay carruurta dhan ee degen waddanka waa in eey aadaan dugsiga hoose dhexe. Iskoolku waxa ay shaqadiisu tahay in ay ardayda ammaan ku yihiin iskoolka iyo in eey waxyaabo badan bartaan.
Muxuu yahay waajibaadka waxbarasho ee carruurta ka saaran waalidka
Waajibka waalidka ka saaran waxbarashada carruurtooda waa in ay carruurta iskool u diraan. Laakiin mararka qaar waxay ahaan kartaa in ay carruurta iskool tagi karin. Tusaale ahaan haddii aad qabto cudur markaa kuu diidaya in aanad iskoolka caadiga ah aadi karin waxaa wax laguugu dhigi karaa meel kale, tusaale ahaan guriga ama isbitaalka.
Muxuu yahay waajibka saaran iskoolka
Iskooola waajibka saaran waa in ay arday walba siiyaan jawi ammaan ah uu wax ku barto si ay ardayda ugu qeyb qaataan waxbarashada. Iskoolku waa in uu waafajiyaa waxbarashada si ay ugu haboonaato qof kasta baahidiisa, taa waxa ay noqon kartaa in aad caawinaad dheeraad ah ugu baahantahay macalinka ama qalab qaas ah. Waxaa xataa xaq u leedahay in aad ammaan dareento – qofna ma ahan in sharafta laga rido ama iskoolka lagu kadeedo. Wixii dheeraad ah halkan ka aqriso:
Waxaad xaq u leedahay in aad amaan dareento
Maxaa dhacaya haddii aan imaado iskoolka ka bacdi?
Waxaad xaq u leedahay in aad fasalka sagaalaad ka baxdo. Iskoolka ayaa kaa caawinaya fasallada oo dhan. Micno malahan waqtiga ay qaadaneyso.
Hadaadan ogeyn inta aad deganaaneyso Sweden
Hadii aad ku meel gaar u degantahay Iswiidhan qasab ma ahan in aad iskool aaddo – laakiin mararka qaarkood waxaad xaq u leedahay in aad iskoolka iswiidhishka aaddo. Markaa xattaa uma baahnid in aad lacag bixiso. Taa waxa ay ahaan kartaa tusaale ahaan hadii aad ku nooshahay adigoo qoxooti ah qarsoodi. Hadii aad Iswiidhan ka dalbaneysid magangelyo ama aad leedahay sharci ku meelgaar ah.
Hadaanad helin caawimaadda aad u baahantahay
Hadii aadan helin cawimaadda aad u baahantahay waxaad la hadli kartaa macalinkaaga ama qof kale oo weyn oo aad ku kalsoontahay. Markaa iyagaa la hadlaya macalinka ama maamulaha. Dadka waaweyn ee iskoola jooga waa in ay kusiiyaan waxbarasho fiican sida ugu macquulka ah.
Hadii aad dareento in uusan maamulaha ku dhageysaneynin waxaad la hadli kartaa qofka iskoolka dhan u sarreeya, oo ah madaxa ka sareeya maamulaha. Hadii aysan kula eheen in aad heshay caawinaaddii aad xaqa u laheyd waxaad dacwad u diri kartaa annaga oo ah kormeerayaasha iskoolka, Wixii dheeraad ah halkan ka aqriso: